Author Topic: Su'aal: Maxaa keena xubinta taranka oo neef ka soo baxdo? (Read 99148 times)
« on: December 18, 2009, 02:33:09 AM »
Asc salaanta islaamka ka dib dhaman waxan leeyahay Aqoon yahanada ku taquuqusay cilmiga Caafiimadka dhamaantin MAHADSANIDIN
Su'aashayda waxa weyan xubinta taranka((siilka)) markay dhaq dhaq suubiso ama wax u eeg gariir maxa keena waxas : Ama se ma cudur ba mise Ma leedahay wax Daawo ah oo lagu joojin karo gariirka ama guuxas aad moodo meel ay ka baxayso neef
Re: Su'aal: Maxaa keena xubinta taranka oo neef ka soo baxdo?
« Reply #1 on: December 19, 2009, 08:23:02 PM »
Hawada ka soo baxda xubinta taranka ee haweenka waa xaalad jirta laguna magacaabo "Flatus Vaginalis ama Vaginal Flatulence", waxayna ka dhalataa aaryo ku aruurtay xubinta taasoo cadaadis xoog leh ku soo baxdo wax yar ka dib weliba markuu qofku sameeyo wax cadaadis abuuraya sida in qofku fadhiisto, fooraarsado ama isagoo waxba smaynin mararka qaar.
Hawadaa markii ay soo baxayso waxay lahaan kartaa gariir ama guuxba.
Waxay badanaa hawada gashaa xilliga galmada, jimicsiga ama adigoo waxna samayn haddii aad leedahay murqo dabacsan ee xubinta taranka khaasatan dhalmada ka dib.
Hawada waxay u soo baxaysaa sidii dhuusada oo kale laakiin malahan wax ur ah, inkastoo wax dhibaato caafimaad aysan laheen laakiin waa wax xishood iyo dhaxdin ku abuura qofka markuu isku arko.
Hadii hawadaa soo baxayso ay leedahay ur sida dhuusada oo kale waa in dhakhtar u tagtaa maadaama ay noqon karto "Fistula" ama dalool isku furan oo u dhaxeeyo dabada iyo farjiga.
Xaaladaan kuma xirna da'da iyo gabarnimadaba.
Waxaan xaaladaan lagu daaweeyaa jimicso loogu tala galay xoojinta muqaha miskaha iyo xubinta taranka waxaa jimicsigaas loo yaqaannaa "Kegel Exercice".
Halkaan ka akhriso oo ka fiirso qaabka loo sameeyo Jimicsiga Kegel Excercise "Click here"
Hadii aad qabto su'aalo dheeraad ah iigu soo dir qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Views: 51518 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 147914 August 23, 2015, 02:14:13 PM
Views: 100722 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 53706 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 57049 April 06, 2016, 04:35:38 PM